सुष्माले खोलिन् श्वेताको पोल ! – Namaste Host
सुष्माले खोलिन् श्वेताको पोल !
February 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सुष्माले खोलिन् श्वेताको पोल !
केहि दिन आघि आफूलाई श्वेता खड्का सहितले गा’ली’ग’लौज र कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै नायिका सुष्मा कार्कीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । अभिनेत्री श्वेता खड्का, पति विजयेन्द्र राउत, बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसाइलीले कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै कार्की प्रहरी समक्ष उजुरी लिएर दरबारमार्ग सम्म पुगेकी थिइन् ।
सुष्माले सोमबार साँझ लन्डन पब क्याफेमा आफूमाथि कु’ट’पि’टको घटना भएको दाबी गरेकी सुस्माले बताएकी थिईन । सुष्माको दाबीको सत्यता बुझ्न प्रहरीले सिसिटिभी फुटेज मगाएर हेर्दा इकागजले प्राप्त गर्यो । ‘सीसीटीभी फुटेजमा सुरुमा सुष्मा र पत्रकार उत्सव रसाइलीबीच विवाद भएको देखियो । पछि उत्सव अर्कोतिर लागे पछि श्वेताको बहिनी आरती खड्काले सुष्मालाई भु’त्ल्या’एको देखिएको थियो ।
यहि कुरामा सुष्माले एक अन्तर्वार्ता खुलाएकी छिन । श्वेताले आफ्नो बहिनीलाई कुट्न लगाएको आरोप लगाउदै खड्का र उनको साथमा रहेका पति तथा बहिनीले कु’ट’पि’टसँगै आफूलाई तथानाम गा’ ली गरेको र अ’प’श’ब्द प्रयोग गरे । मैले पनि एक च ड्न त् ह न्न सक्थे नि तर मैले त्यसो गरिन भन्दै आईन मिडियामा हेर्नुहोस पुरा भिडियोमा :
बिनय जंग बस्नेतसँग के भएको हो सपना रोका मगरले पहिलोपटक मुख खोलिन्
भर्खरै लाहुरेले एसरि गरे ना,ठोको रामधु,लाइ घर बार बिगर्ने धोती प,क्राउ
… पुरानो थियो रिसिवी बदला लिन यस्तो घटना !
February 24, 2021 February 25, 2021 Bijay Lama
यी हुन् खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट
February 12, 2021 Bijay Lama